Ka dib 13 Sano oo Hogaamin ah, Madaxweyne Kate Wolford wuxuu ka fariistay McKnight
Qalbiyadeenna oo ay ka buuxaan mahadnaq adeeggeeda, ayaan wadaagnaa wararka taas Kate Wolford, madaxweynaha McKnight Foundation, wuxuu shaqada ka fariisanayaa McKnight bisha Nofembar.
"Waxaan si aad ah ugu mahadnaqaynaa Kate adeeggeeda Mu'asasada McKnight," ayuu yiri Debby Landesman, gudoomiyaha guddiga McKnight. Waxaan u dabaaldegnaa guulo badan oo ay soo hooyeen iyo hogaan wanaagsan, oo waxaan u seegi doonnaa saaxiibteena iyo saaxiibkaa. Waxaan sidoo kale ku taageernaa go'aankan waxanan rajeyneynaa sida ugu wanaagsan.
Muddo 13 sano ah, Kate wuxuu wakiil u ahaa himilada Hay'ada McKnight, isaga oo kormeeraya hantida $2.3 bilyan iyo miisaaniyad-siin deeq-lacageedka sanadlaha ah oo gaaraya $90 milyan. McKnight wuxuu luminayaa hoggaamiye naxariis badan oo dhammaystiran oo xikmadda leh, xushmad iyo nimco leh. Kate waxay qorshaysay inay hawlgab ka dhigato jiilka xiga ee hogaamiyaasha markii walaacyada caafimaad ee dhowaa ay ka soo saareen go'aankeeda. Markay ka dhaqaaqayso doorkeedii, Kate waxay weli la-talin iyo saaxiib la tahay guddiga McKnight iyo shaqaalaha, iyo sidoo kale bulshada Minnesota, goobta tabaruca, iyo wixii ka dambeeya.
“Waxaan uga mahadcelineynaa Kate hogaankeeda dhanka hormarinta howlgalka Mu'asasada. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa marwalba inay ina xasuusiso bini-aadamnimadeena.
Kate waxay bilowday doorkeedii madaxweynaha markii ay ahayd 2006, iyada oo ku hagaya guddiga iyo shaqaalaha dejinta istiraatiijiyad, ficil, iyo dabagal joogto ah oo ku saabsan barashada iyo la qabsiga Intii lagu guda jiray mudadii ay jirtay, Mu'asasada waxay sameysay balanqaad geesinimo leh Saamaynta maalgashiga, oo loo qoondeeyay $200 milyan maalgashiga si dhaw ula socda himilooyinka ururka iyo kobcinta fikrad aad u han weyn oo ah sida aasaaska u horumarin karo howlaheeda sidii maalgashi hay'ad ah. Waxay gacan ka geysatay abuur abuurka mid ka mid ah istiraatiijiyadihii ugu horreeyay ee kaarboon kaarboon ee dalka, iyo bixinta hufnaanta suuqa-hoggaamineed ee hufnaanta saamaynta ee hay'adda. Ka dib shan sano oo gaaban, in kabadan mid ka mid seddexdii doollar ee deeqda la siiyay ayaa la socdaa himilo, taasoo u oggolaaneysa McKnight inuu u adeegsado waxbadan oo ilihiisa ah si uu u baadi goobo mustaqbal dadka iyo meeraha ay ku najaxaan.
Dhawaan, Kate wuxuu hoggaanka u hayey dadaalkeeda ku aaddan sidii ay u sixi lahayd deeqda McKnight, iyagoo mudnaanta siinaya labo ka mid ah dhibaatooyinka ugu degdegga badan ee waqtigeenna taagan: isbeddelka cimilada iyo sinnaanta isirka iyo isugeynta. Dayrtan, ayay ku dhawaaqday Qorshaha aasaasiga ah ee ah inuu si qoto dheer u maalgashado xalalka cimilada ee Midwest isla markaana loo hormariyo mid loo siman yahay oo loo wada dhan yahay ee Minnesota.
Laga soo bilaabo bilowgii, Kate wuxuu qaatay daah furnaan weyn xagga wadaagga waxa McKnight uu ku baranayo qaybaha kaladuwan ee bulshada iyo bulshada, oo ay ku jirto safarka Aasaasiga ee xagga kala-jaadnimada, sinnaanta, iyo ka mid noqoshada (DEI). Iyada oo hoos timaaddeeda, McKnight waxay hirgalisay tabobarro-tababar ku saabsan aqoonta dhaqamada kala duwan ee dhammaan shaqaalaha, waxay a bayaanka dadweynaha muujinta ballanqaadkeena DEI, oo ku dhajiyay DEI qiyamka aasaasiga ah ee Foundation iyo Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah. Shaqadani waxay noo suurta gelisay inaan ku sinno sinaanta barnaamijka cusub ee bulshada ee soo socda.
"Waxaan ku faraxsanahay waxa McKnight ay gacan ka siisay Minnesota iyo adduunka oo dhan, iyo awooda ay u leedahay in ay had iyo jeer la qabato laqabsashada baahiyaha ugu daran," ayay tiri Kate Wolford. "Waxaan jeclahay cilaaqaadka aan lalahahay guddiga, shaqaalaha, iyo bulshada, waxaanan dareemayaa qalbi jugyo badan oo isbeddelo dhiirrigelin leh oo aan ku maamuusay inaan la shaqeeyo McKnight."
Ka hor inta uusan ku biirin McKnight, Kate wuxuu 13 sano madax ka ahaa Lutheran World Relief, deeq-lacageed caalami ah iyo hay'ad u doodda siyaasad. Shaqadan iyo in kabadanba, waxay safar balaadhan ku qaadatay Latin America, Caribbean-ka, Afrika iyo adduunka oo dhan. Waxaan rajeyneynaa in wajigan soo socdaa uu u keenayo fursado badan oo ay waqti kula qaato ninkeeda iyo asxaabteeda si ay u qabtaan waxa ay ugu jeceshahay: safarka, doonida, iyo daawashada shimbiraha.
Waxaan uga mahadcelineynaa Kate hogaankeeda horuumarinta howlaha Mu'asasada, iyo sameynta xiriirka adag, aaminaada xiriirka ay la leeyihiin deeq bixiyadeena iyo jaalayaasha kale. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa iyada marwalba ina xasuusisa bini-aadamnimada aan wadaagno.
Debby Landesman wuxuu qaatay doorka madaxweynaha ku-meel-gaarka ah, Mu'asasaduna waxay bilaabi doontaa baaris qaran oo loogu talagalay madaxweynaha cusub bilaha soo socda.
Baaq ah in la ilaaliyo daacadnimada doorashada iyo dimuqraadiyadda